मनिपालका डा. विश्वदीपले चलाएको कारको ठक्करबाट ४ वर्षीय बालकको हस्पिटल पार्किङमै मृत्यु - Gandak News
मनिपालका डा. विश्वदीपले चलाएको कारको ठक्करबाट ४ वर्षीय बालकको हस्पिटल पार्किङमै मृत्यु
बालकका आफन्त भन्छन्ः 'एक हातमा मोबाइल, अर्को हातमा स्टेयरिङ'
गण्डक न्यूज द्वारा ७ असार २०७६, शनिबार ११:५३ मा प्रकाशित 0
रञ्जन अधिकारी, पोखरा । मनिपाल अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विश्वदीप तिमिल्सिनाले चलाएको कारले ठक्कर दिँदा चार वर्षीय बालकको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ । पोखरा २८ माझठाना घर भएका ४ वर्ष २ महिना उमेरका बालक संस्कार कँडेलको मनिपाल अस्प्ताल पार्किङ एरियामा डा. तिमिल्सिनाले चलाएको कारको ठक्करबाट ज्यान गएको हो ।
बालक आफ्ना बुबाआमासँग विहान ८ बजे पोखरा रानीपौवाबाट मनिपाल अस्पतालमा उपचाररत आफ्नी हजुरआमा भेट्न अस्पताल पुगेका थिए । बुबाको मोटरसाइकलबाट झरेपछि साइड लागेका बालकलाई डाक्टर तिमिल्सिनाले चलाएको गाडीले एक्कासी ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रत्यक्षदर्शीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा जनाए ।
आज विहान साढे ८ बजे घटना भएको र ५ मिनेटपछि ईमर्जेन्सी कक्षमा लगिएको जनाउँदै बालकका आफन्तले पौने १० बजे मात्र बालकको मृत्यु भएको अस्पतालबाट जानकारी आएको बताएका छन् । आफन्तले भने बालकको ‘अन द स्पट डेथ’ भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रहरीहरु अहिले अनुसन्धानमा रहेकाले घटनाबारे पछिमात्रै सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिने बताएको छ ।
आफन्त भन्छन्ः एक हातमा मोबाइल, अर्को हातमा स्टेयरिङ
मृतक बालकका आफन्तले डाक्टर विश्वदीपको चरम लापरबाही रहेको आरोप लगाएका छन् । डाक्टर एक हातले मोबाइलमा गफ गर्दै एक हातले स्टेयरिङ समातेर गाडी हुईंक्याएको आफन्तको जिकिर छ । उनीहरुले डाक्टरलाई हदैसम्म कारबाहीको माग गरेका छन् ।
हस्पिटलमा आफन्त र प्रहरीबीच तनाव
बालकका आफन्तले डाक्टर विश्वदीप तिमिल्सिनालाई अस्पतालमै झिकाएर घटनाबारे उनकै मुखबाट सुन्न चाहेको बताएका छन् । तर, डाक्टर तिमिल्सिना र ठक्कर दिने कारलाई भने प्रहरीले कास्की प्रहरी चौकी लगिसकेको छ ।
अहिले अस्पतालमा तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ । आफन्तले गैरजिम्मेवार चालकलाई कडा कारबाही नभएसम्म मृतक बालकको शव नबुझ्ने जनाएका छन् । प्रहरीले आफन्तलाई अस्पतालमा रोकेको छ । आफन्तहरु भने प्रहरीसँग रुष्ट बनेका छन् । अपराधी डाक्टरकै पक्षमा लागेर उनको मात्र सुरक्षा दिएको आफन्तहरुको प्रहरीमाथि आरोप छ । माहौल नियन्त्रणबाहिर जान नदिन कास्की प्रहरी अधिकारीहरु आफै अस्पतालमा खटिएका छन् ।
घटनाबारे थप विवरण प्रस्तुत गर्दै जानेछौं ।